Ama La Vida: 2 BHK, idolophu yaseFransi, umbono wolwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSamarth
Wamkelekile kumyili weflethi yethu kwidolophu yaseFransi. Umganyana othe qelele kwipromenade yaselwandle, le ndlu inamagumbi amabini okulala e-AC anamagumbi okuhlambela ancanyathiselweyo kunye neebhalkhoni, kunye negumbi lokuhlala elinomoya elinebhedi yesofa. Kukho ilifti ngokunjalo.
Sinayo yonke into oyifunayo ukunika ixesha lekhefu: ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo, i-premium furnishings, i-AC, amanzi ashushu, ilinen kunye neetawuli, umabonakude, i-WIFI, umatshini wokuhlamba. Kukho indawo yokupaka eyaneleyo kwi-boulevard ukuze upake imoto yakho okanye iibhayisekile.
I-Ama la Vida ithetha 'ubomi bothando' ngeSpanish kwaye sisilogeni sase-Ecuador. Mna nomninawa wam siye saya kwincopho yeCotopaxi ngo-2017. Ukufudumala, imibala eqaqambileyo, uvuyo lokuphila yayiyizinto zethu eziphambili zokuthatha uhambo lwethu oluya eMzantsi Melika. Ukugcina iinkumbulo etyeni, sakha indawo yokuhlala yase-Ama la Vida ukuze inikeze indawo yokuhlala etofotofo kubantu abafuna ukuzifumana ePondicherry.
Le ndlu ayitshaywa, akuselwa kwaye akukho ndawo ingxolayo. Ukuba ufuna iingcebiso malunga nemivalo kunye neminye imisebenzi, siya kuvuya ukwabelana ngothando lwethu lwePondicherry kunye nayo yonke into enokukunika yona. Akukho zilwanyana zasekhaya nceda, iPondicherry inezilwanyana zasendle ezininzi!
P.S Sine-1bhk ezimbini zabantu abane kunye kunye nezitudiyo ezimbini zabantu aba-2 kwisakhiwo esifanayo. Taktsang, Uhuru, Casa Inca kunye neCote d'Azur.
4.91 ·Izimvo eziyi-146
Umbuki zindwendwe ngu- Samarth
Ungathumela umyalezo nangaliphi na ixesha okanye ufowunele phakathi kwe-9 am kunye ne-7 pm IST